Adobe, Twitter uye main media media vari kuenda kunorwa zvakadzika? : Martin Vrijland
Adobe, Twitter uye main media media vari kuenda kunorwa zvakadzika?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa6 November 2019	• 0 Comments
In rangu bhuku idzva Ini ndinotsanangura nzira dzakadzika dzinogona kushandiswa muzvikamu zvakasiyana mune zvinoburitswa, asiwo pamahedhiyo enhau uye nhaurwa dzekukurukurirana, uye ini ndinotsanangura kuti venhau vakaita sei nehungwaru hwekuisa nhau kuzviitiko makumi emakore. Kuti izvi zvinodzingwa nevakawanda sechipangamazano, pasi penyaya ye kuti nguva dzose kuve nemunhu pakati pavo ane hana dzichataura, inofuratira compartmentalisation yezivo. Kana makambani enhau uye mapepanhau akagamuchira nhau kubva kune 1 sosi uye kuti sosi imwe ndeye, semuenzaniso, General Dutch Press Office raJohn de Mol, ipapo chete boka diki mukati iro ANP rinoda kuziva nezvekuita kwakadaro. Uye mukati meiyo timu zvakare, kupatsanura ruzivo kunogona kuve nechokwadi kuti vanhu vashoma chete ndivo vanofanira kuziva nezvenzira dzinogona kuitika uye kunyengera.
Ini kazhinji ndinoshamiswa kwazvo nekusavimba kukuru mune vezvenhau, zvakare pakati pevanonzi vanomutswa. Kana kuita kwako kwekutanga kuchinhu chenhau kuchiri kushamiswa kana kuti "kufadzwa," ipapo hausati waziva nguva yose iyi kuti vanhu vari kusundidzirwa sei kumutemo mutsva unemabasa epfungwa. Vanhu vanoshinga kutaura nezve 'kuziva' uye vanotenda chaizvo kuti dzimwe nguva kushanda kwenhema mureza kwakaitika, asi izvo zvese zviri kure uye zvechokwadi hazvitika muNetherlands, nekuti maDutch akavimbika uye isu tese tine vanhu vane mariri. vezvenhau uye vezvematongerwo enyika uye mazhinji ezvematongerwo enyika akakosha muThe Hague. Vanhu vakaita saJeroben Pauw naMatijs van Nieuwkerk vachiri paruoko uye isu hatisati taona kuti ivo vanyamakuru vekunzwisisa vane nhaurwa dzekugadzira kutaridzika kwekutsoropodza uye kutora mukana wekuwana kuti kunyengera kwakadzika zvakadii. . Isu hatitendi kuti kupikiswa kunogona kudzorwa.
Kana, mukushanda kwepfungwa kuti munhu wese anofungidzira ari manyepo nhau, iwe unobata nhaurirano yakakomba, nenyanzvi dzakadzama uye manzwiro mazhinji, ipapo munhu wese achazvitenda. Uye kana ukadzokorora nhau idzo pawairesi ese, mumapepanhau ese uye nenhau dzese, munhu wese ane chokwadi. Iri simba rekunyengerera rinosimbiswa neanodaidzwa kuti akashata ezvimwe nzira midhiya, zvese zvakanyarara pamwechete panguva yekushanda kwepfungwa. Ivo vanochengeta kutarisisa kweanodaidzwa kumutsa asi anotarisa pazvinhu se911, JFK, mwedzi kutema uye marudzi ese eimwe nhau dzekare kana 'kuziva kuziva'; nekudaro kuchengeta avo vakamuka chaizvo munzira yakaoma pamusoro pe (kanenge zuva nezuva) vachitamba nenhau dzakaitwa dzekunyepera kuzadzisa chirongwa chezvematongerwo enyika. Midhiya uye mimwe midhiya iripo kuchengetedza vanhu vasingazive nzira ye 'Wag the Imbwa' (firimu kubva 1997) nzira dzezvenhau uye muunganidzwa Truman Show (firimu kubva 1998) mune vanhu vanoitirwa. "Nzira yakanaka yekudzora vanopikisa ndeyekuzvitungamira iwe"
Adobe, iyo kambani inogadzira graphic software iyo, semuenzaniso, mafirimu anogona kugadziriswa, yakazivisa zuva radarika zuro kubatana ne Twitter uye New York Times. Ivo vanoda kuunza yechokwadi yezvinyorwa chiyero. Mubhuku rangu ndakatozivisa kare kuti izvi zvaiuya uye zvingaite senge chirongwa chakanakisa, chinogona kudzivirira "feki dzeRussia fekitori venhau" kubva pakugadzira mavhidhiyo ekunyepedzera kubatsira Donald Trump kuhwina sarudzo inotevera, asi Chero ani anobata kiyi yeiyo chiyero chechokwadi ichi anogona, mukati mushe, kuti vhidhiyo yega yega kubva kune "inotenderwa sosi" ndeyechokwadi uye kuti chero munhu anonetsekana kutaura kuti inhema manyepo. Muchokwadi; isu zvimwe tichaona mafirimu ekunyepedzera ari kuuya munguva inouya yekukwevera kutarisa kwakanyanya kune dambudziko. Tinogona kuzvienzanisa izvo nenhema nzvimbo dzenhau dzakagadzirwa nemaune, dzaidaidzirwa kuti dzitaure kutitarisa manyepo enhau enhau aripo, saka isu tinofanirwa kumisikidza imwe yemhando ye 'hushumiro yezvokwadi' Facebook uye social media censorship". Ichi chitsva chechokwadi chekuvimbika hachizove chakawanda kudarika icho: ushumiri hwaGeorge Orwell 1984 hwechokwadi chechokwadi.
Ikozvino hapana mubvunzo kuti pachave neanokokwa nyanzvi kutafura yaJeroben Pauw kuti atsanangure kuti kwakanaka uye kwakadii chiratidzo chakadai kunaka, asi kana iwo makuru makuru masangano anogamuchira kodhi yakanyorwa kuti abvumidze nhau dzadzo dzose dzenhema, unorangarira kwete izvo iwe zvaunowana kubva kune izvo mhinduro uye izvo chaizvo zvinongosimbisa iyo monopoly pane kugadzirwa kwenhema nhau.
Source chinyorwa listings: engadget.com
Kuuraya kaviri kwaGina naMarinus muPatie cinema Groningen
Tags: Adobe, chokwadi chakazara, gutsikana, deepfakes, Featured, vezvenhau, nhau dzakaipa, itsva, nguva, Twitter, York
« Idzva Martin Vrijland bhuku 'Icho chokwadi sezvatinozviona' chakagadzirira kutumirwa!
Gweta raShot, Philippe Schol nemubiribiri wembavha anonzi Schiphol »
Total Visits: 14.017.587
Sei uchida kuziva izvi? op Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
Ben op UN manifesto '90 inoratidza: matanho emamiriro ekunze akagadzirwa kuti aite hurumende yenyika
Martin Vrijland op Sekuru vaGreta Thunberg-sekuru vanoshanduka kuva muumbi wegreenhouse athari uye kuderedzwa kwehuwandu kuburikidza eugenics
SandinG op Sekuru vaGreta Thunberg-sekuru vanoshanduka kuva muumbi wegreenhouse athari uye kuderedzwa kwehuwandu kuburikidza eugenics
SalmonInClick op Sekuru vaGreta Thunberg-sekuru vanoshanduka kuva muumbi wegreenhouse athari uye kuderedzwa kwehuwandu kuburikidza eugenics